Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Wax-soo-saarka - Shiinaha Warshad Qalab-daabadeed
Cross Stitch Cotton Thread Masaarida Cotton Midabka Cotton Carada tolmo 981457A
Halbeegyada Waxsoosaarka 24 Dufcaddii Monochrome dunta xargaha midabka qaanso xargaha. Lixda Xarig ee xargaha isku xidhka ah waa kala-qaybin, caag iyo dun cudbi ah oo laga sameeyay fiilooyinka suufka ugu muhiimsan ee dhaadheer. Waa labalaab meeris loogu talagalay sheen khiyaano ah, oo lagu daray waa midab midab leh oo libdhi kara. Xargaha xargaha waxaa loo isticmaali karaa sameynta jijimooyin saaxiibtinimo, iskutallaab xariiq, xargo, farshaxanno carruurta, tolidda, tolidda, DIY, Crochet iyo wixii la mid ah. Ku habboon carruurta, saaxiibbada, hooyooyinka, hooyooyinka, ...
8 Mitir 6 Tilmaamaysa Polyester Cotton Emboid Thread Polyester Cotton Cross Stitch Thread6310007
Halbeegyada Waxsoosaarka 100 kumbiyuutar / 50pcs oo la dhigay midab kala duwan oo dunta dunta ah lagu dhejiyo oo lagu tolo dunta gacmaha lagu sameeyo ee DIY toy. Lixda Xarig ee xargaha isku xidhka ah waa kala-qaybin, caag iyo dun cudbi ah oo laga sameeyay fiilooyinka suufka ugu muhiimsan ee dhaadheer. Waa labalaab meeris loogu talagalay sheen khiyaano ah, oo lagu daray waa midab midab leh oo libdhi kara. Iskutallaabta dunta iskutallaabta waxaa loo isticmaali karaa sameynta jijimooyin saaxiibtinimo, Isgoysyada iskutallaabta ah, Xaraashka, farshaxanka carruurta, tolidda, tolidda, DIY, Crochet ...
.Wholesale Eco Friendly Handmade Midab Suuf leh Xidhmada Floss Dhogor Thread Cross Tolmo tolida Thread6310009
Halbeegyada Waxsoosaarka 80 midab xargaha xargaha xargaha oo lagu xiro xirmada xirmada sanduuqa wax lagu keydiyo. Xarig tayo sare leh oo midab dhalaalaya leh, stereoscopic, awood sare, xirashada iska caabin, ha libdhin, ha isku buuqin si fudud ha u jabin. Tayo sare leh oo waarta thread dunta daabacan waxaa laga sameeyaa caag jilicsan, siman oo xiiqsan. Si fudud loo isticmaali karo, Fiilo kasta dhererkeedu waa 8m oo walxaha kasta ee xarkaha dunta ahi waxay ku yimaadaan lix xadhig. Iskutallaabta dunta iskutallaabta waxaa loo isticmaali karaa sameynta jijin saaxiibtinimo ...
100 Midab DIY Midab Cotton Muruq ah Mawjadda Xarkaha Isku-xidhka Taararka Buugga DIY Midabka Cadka Cotton6310006
100 midab DIY dun midab dun leh oo xarig ah xargaha xargaha xargaha fiilooyinka DIY midabka suufka midabka ah. Xarig tayo sare leh oo midab dhalaalaya leh, stereoscopic, awood sare, xirashada iska caabin, ha libdhin, ha isku buuqin si fudud ha u jabin. Tayo sare leh oo waarta thread dunta daabacan waxaa laga sameeyaa caag jilicsan, siman oo xiiqsan. Si fudud loo isticmaali karo, Fiilo kasta dhererkeedu waa 8m oo walxaha kasta ee xarkaha dunta ahi waxay ku yimaadaan lix xadhig. Iskutallaabta xargaha waxaa loo isticmaali karaa sameynta jijimooyin saaxiibtinimo, Isgoysyada iskutallaabta, Xaraashka, farshaxanka carruurta, tolidda, Xirmooyinka, DIY, Crochet iyo wixii la mid ah. Waxay ku habboon tahay carruurta, asxaabta, hooyooyinka, hooyooyinka ayeeyada, asxaabta, jaarka ama bilowga tolidda ama xaglinta.
50 / 100skeins of thread Multicolored For Embroidery Cross Cirbadda Tolida Jijimaha Midabada Mawjadda Cross Stitch Cotton tolmo 6310001
50/100 Midabyo Caano Eco-Friendly oo cudbi gacmeed lagu sameeyey oo cudbi ah
dunta lagu tolo dunta dunta leh ee dunta lagu tolo.
Xarig tayo sare leh oo midab dhalaalaya, stereoscopic, xoog sare,
xiro iska caabin, ha libdhin, si fudud haku jajabin jajabku. Tayo sare leh oo waara ，
dunta daabacan waxay ka samaysan tahay caag jilicsan, jilicsan oo jilicsan. Si fudud loo isticmaalo,
Fiilo kasta dhererkeedu waa 8m oo walxaha kasta ee xarkaha dunta ahi waxay ku yimaadaan lix xadhig.
Isku-darka dunta iskutallaabta waxaa loo isticmaali karaa sameynta jijimooyin saaxiibtinimo,
Xaraashka, farsamada carruurta, tolida, tolnimada, DIY, Crochet iyo wixii la mid ah. Ku habboon
carruurta, asxaabta, hooyooyinka, ayeeyooyinka, asxaabta, jaarka ama bilowga ama tolida tolida.